﻿﻿	ကပ်ခွာပြား | Find My Method
အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးဆေးလုံးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ အပတ်တိုင်း ကပ်ခွာပြားအသစ်တစ်ခုသုံးရန်လိုသည်။
ထိရောက်မှု- ကပ်ခွာပြားသည်လူအများအသုံးပြုပြီး အလွန်ထိရောက်သည်။ အတိအကျ သောက်ပါက အမျိုးသမီး ၁၀၀ လျှင် ၉၉ ယောက်သည်ကိုယ်ဝန်ကိုကာကွယ်နိုင်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် လူအများအသုံးပြုသည့်နည်းအရ ဤကပ်ခွာပြားသည်အမျိုးသမီး ၁၀၀ တွင် ၉၁ ယောက် ကိုယ်ဝန်မှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – ပျို့ချင်ခြင်း၊ ပုံမမှန်သွေးဆင်းခြင်းနှင့်ရင်သားနာခြင်းတို့မှာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သော်လည်း များသောအားဖြင့်ယာယီသာဖြစ်သည်။ အရေပြားယားယံခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
အားထုတ်ရမှု- အလယ်အလတ်။ အပတ်တိုင်း ကပ်ခွာပြားအသစ်တစ်ခုသုံးရန်လိုသည်။
သန္ဓေတား ကပ်ခွာပြား အကျဉ်းချုပ်
ကပ်ခွာပြားသည်ပါးလွှာသောပလတ်စတစ်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်ပြီး စတုရန်းပုံ Band-Aidအနာကပ်ပလာစတာ နှင့်တူသည်။ ထောင့်ဖြတ် ၅ စင်တီမီတာထက်နည်းသည်။ သင်၏အရေပြားပေါ်တွင်ကပ်ခွာပြားကိုကပ်ထားရပြီး ၎င်းသည် မျိုးဥအိမ်မှဥများထုတ်လွှတ်မှုကိုတားဆီးသော ဟော်မုန်းများကိုထုတ်ပေးသည်။ ဟော်မုန်းတွေကသားအိမ်ခေါင်းချွဲကိုပိုထူလာစေပြီး သုက်ပိုးတွေကိုမျိုးဥသို့မရောက်ရှိအောင်တားဆီးပေးသည်။
၎င်းသည်ဆေးလုံးလောက် အားစိုက်ထုတ်ရန် မလိုပဲ ဆေးထိုးအပ်များ မလိုအပ်ပါ။ သင်သည် နေ့စဉ်ဆေးလုံးကို မသောက်လိုလျှင် ကပ်ခွာပြားသည် ရွေးချယ်ခွင့်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၇ ရက်တစ်ကြိမ်တိုင်း ကပ်ခွာပြား အသစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုဖို့သတိရဖို့လိုသည်။
အလေးချိန် ၉၀ ကီလိုဂရမ်အောက်သာရှိလျှင်၊ ကပ်ခွာပြားသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်သည် ၉၀ ကီလိုဂရမ်ကျော်အလေးချိန်ရှိပါက ကပ်ခွာပြားသည် ထိရောက်မှုနည်းနိုင်သည်။ သင်သည် ၉၀ ကီလိုဂရမ်ကျော် အလေးချိန်ရှိပါက အခြားသန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
သင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောရာသီကိုလိုချင်သည်။ လစဉ်လတိုင်း သင်၏ရာသီကို သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း မရှိပဲ လာစေလိုပါက၊ ကပ်ခွာပြားသည် ရွေးချယ်ခွင့်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်သည်အသက် ၃၅ နှစ်အောက် ဆေးလိပ်သောက်သူ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်လျှင်၊ ကပ်ခွာပြားသုံးစဉ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ် ပိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်ဆွေးနွေးရန်အကြံပြုပါတယ်။
သန္ဓေတားနည်းအသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ပြီး မြန်မြန် ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိုပါသလား? သင် ကပ်ခွာပြားကိုဆက်မသုံးခြင်းဖြင့် ချက်ချင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်ကပ်ခွာပြားအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက အခြားနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။
ကပ်ခွာပြားကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာ အပတ်တိုင်း အသစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရန် သတိရဖို့ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် သုံးပတ်ဆက်တိုက် ကပ်ခွာပြားအသစ်တခု ကပ်ပေးပါ။ စတုတ္ထအပတ်တွင် ကပ်ခွာပြားကို မသုံးပါနှင့်။
ကပ်ခွာပြားကို သင့်တင်ပါး၊ ဝမ်းဗိုက်၊ လက်မောင်းအပေါ်အပြင်ဖက် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ထည်အထက်ပိုင်း တို့တွင် ထားရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ရင်သားပေါ် မကပ်ပါနှင့်။
ကပ်ခွာပြားမပါသည့်ရက်သတ္တပတ်အတွင်း သင့်ရာသီ လာနိုင်ပါတယ်။ ကပ်ခွာပြားကိုပြန်တပ်ဆင်ရန်အချိန်တွင် သင်သွေးဆင်းနေ ဦး မည်။ ဒါဟာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကပ်ခွာပြားအသစ်ကို ကပ်ထားပါ။
ကပ်ခွာပြား ကို သုံးရပိုလွယ်စေရန် အောက်ဖော်ပြပါ သိကောင်းစရာအထာလေးများ ကိုစစ်ဆေးပါ။
သိကောင်းစရာ ၁ – သင့်ရာသီ၏ပထမ ၅ ရက်အတွင်း စတင်သုံးပါက သင်သည် ကိုယ်ဝန်မှချက်ခြင်းကာကွယ်ခံရသည်။ နောက်မှစတင်ပါက သင့်အားအကာအကွယ်မပေးမီ ၇ ရက်စောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းသင်သည်အရန်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုရမည်။
သိကောင်းစရာ ၂ – ဘယ်နေရာမှာကပ်ခွာပြား ကပ်ချင်တယ်ဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပါ၊ ထိုနေရာတွင်တစ်ပတ်လုံးရှိနေပါမည်။ အသားအရေတွန့်ရာများ သို့မဟုတ် တွဲနေသည့်နေရာကို ကပ်ခွာပြားမကပ်ပဲ ရှောင်ပါ။
သိကောင်းစရာ ၃ – ဦးဆုံး ပလပ်စတစ်အကြည်တစ်ဝက်ကို ခွာခြင်းဖြင့် စေးကပ်မှုမရှိသောနေရာကို ကိုင်ထားနိုင်ပါမည်။
သိကောင်းစရာ ၄ – ကပ်ခွာပြားရဲ့စေးကပ်သောအပိုင်းကို လက်ချောင်းများဖြင့်မထိပါစေနှင့်။
သိကောင်းစရာ ၅ – ရွေးချယ်ထားသောကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းပေါ်တွင် ကပ်ခွာပြား ကိုဖိထားပါ။ မြဲမြံခိုင်ခံ့စေရန် ၁၀ စက္ကန့်ကြာအောင် ထားပါ။
သိကောင်းစရာ ၆ – သင်၏ ကပ်ခွာပြား ကိုတင်ထားသည့်နေရာ၌ lotion၊ oil, powder, creamy soap သို့မဟုတ် makeup ကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ ၎င်းတို့က ကပ်ခွာပြား ကို မကပ်အောင် တားနိုင်သည်။
သိကောင်းစရာ ၇ – မှန်ကန်စွာကပ်နေခြင်း ရှိမရှိ သေချာအောင်နေ့စဉ် ကပ်ခွာပြား ကိုစစ်ဆေးပါ။
သိကောင်းစရာ (၈) – သင်ဤ ကပ်ခွာပြား ၏အစွန်းပတ်ပတ်လည်၌ပိုးကြိုးစလေးများကပ်ထားနိုင်သည်။
သိကောင်းစရာ ၉ – ကပ်ခွာပြား ကိုဖယ်ရှားသည့်အခါ လွှင့်မပစ်မီ တဝက်ပိုင်း ခေါက်ပါ။ ၎င်းသည်ဟော်မုန်းများကို မြေကြီးထဲမထွက်ရန် ကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုအိမ်သာထဲသို့မချပါနှင့်။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – ကပ်ခွာပြား နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမကသင်၏လိင်မှုဘဝအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။.
သုံးရလွယ်၏ – စေးကပ်သော တိပ်တစ်စ ကပ်ခြင်းနှင့်တူသည်
ကျန်းမာရေးပြသနာအချို့မှ ကာကွယ်ပေးသည်။ ဥပမာ – မျိုးဥအိမ်နှင့်သားအိမ်ကင်ဆာ၊ သံဓါတ်ချို့တဲ့သွေးအားနည်းရောဂါ၊ မျိုးဥအိမ်အရည်အိတ် နှင့် တင်ပါးဆုံတွင်းရောင်ရမ်းရောဂါ
နှစ်လ သို့မဟုတ် သုံးလအကြာတွင် ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်များ :
ရာသီချိန်များအကြား သွေးဆင်းခြင်း၊ (သို့) သွေးစက်ကျဆင်းခြင်း
ကပ်ခွာပြား ကပ်ထားသော အရေပြားယားယံခြင်း
အကယ်၍ သုံးလကြာပြီးနောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သင် ခံနိုင်သည်ထက်ပိုပြီးခံစားရသည်ဆိုလျှင်၊ နည်းလမ်းများပြောင်းပြီး ကာကွယ်ထားပါ။ သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည့်နည်းလမ်းကိုဆုံးဖြတ်နေစဉ် ကွန်ဒုံးများသည်ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုပေးသည်။ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
ကပ်ခွာပြား ခဏခဏပြုတ်ကျနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ ?
ကပ်ခွာပြား ပြောင်းရန်သတိမရပဲ မေ့မေ့နေပါက ဘာလုပ်ရမလဲ ?
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ – သင့်ဖုန်းတွင် သတိပေးချက်တစ်ခုထားပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ သတိပေးစနစ်ကိုသုံးပြီး မှတ်မိဖို့အခက်တွေ့နေသေးလျှင် လအတော်ကြား သို့မဟုတ် နှစ်အတော်ကြာမေ့ထားနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို သင် လိုကောင်းလိုနိုင်သည်။ ထိုးဆေးအမျိုးအစားများ၊ implant (သို့) IUD ။
ကပ်ခွာပြားကို နှစ်လခန့်ကြာအောင်သုံးပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည်ထိုကာလအတွင်း ပြေလျော့လာနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အခြားဟော်မုန်းပါသည့်နည်းများနှင့် သင် အလားတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရနိုင်ပါ။ အချိန်နဲ့အမျှ အခြေအနေပိုမကောင်းလာပါက အဝိုင်းကွင်း၊ ထိုးဆေး၊ IUD ဒါမှမဟုတ် implant ကိုသုံးပါ။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-implant အဝိုင်းကွင်း ထိုးဆေး
သင် ကပ်ခွာပြား ကိုအသုံးပြုနေစဉ် သွေးခဲခြင်းဖြစ်ရန်အန္တရာယ် အလွန်နည်းပါးသည်။ သို့သော် အချို့ မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများသည်သင်၏သွေးခဲမှုအန္တရာယ်ကိုမြင့်တက်စေသည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်သွေးခဲရောဂါရှိပါက၊ သို့မဟုတ် သွေးခဲမှုအတွက် အထူးစိုးရိမ်စရာရှိပါက၊ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့်သည် ဤ ကပ်ခွာပြား ဟုတ်မဟုတ်သိရန် သန္ဓေတားဆေးပေးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ စေးကပ်သောအရာများသည် သင့်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးပြီး သင်နေ့စဉ် သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါတိုင်း သတိရစရာမလိုသည့် သန္ဓေတားနည်းကို လိုချင်ပါက implant, IUD, အဝိုင်းကွင်း သို့မဟုတ် ထိုးဆေးတို့ကို စစ်ဆေးရန် လိုပေမည်။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-implant၊ IUD၊ အဝိုင်းကွင်း၊ ထိုးဆေး